Saxaafadu Kama Madaxbanaana Sharciga Dowladda iyo Dalka ay ka Hawl galaan Meelkasta Dunida (Qormo) – Radio Daljir
Abriil 9, 2019 3:28 b 0
Dalkeenu kolkuu burburay ee maqnaansho dawladeed dhacay,xasaafadiina waxaa qabsaday cadawgii soomaaliyeed wakiiladii uu inagu dhex abuurtay,mudadaas dheer saxaafada dalkeenu ma ahayn mid shariyaysan mana aha mid u adeegta danaha qaranka soomaaliyeed,waxayna dalkeena ku hogaamisay wado qaldan iyo u adeegid shisheeye.
Aad ugu fiirsada kol hadaynu niri saxaafadu waxay leedahay tafa tire iyo wakaalad ay hoos timaado,kol hadaynu niri saxaafadu waxay u adeegtaa danaha dalkeeda,waxaa is waydiin leh saaxaafadan jaantaa rogan ah oo tirada badan yay u adeegaan? yaa mu shahar siiya? yay qancinayaan oo warka u tabaniyaan oo warkaa ka faa iidaya oo dirsaday iyaga? Mawaxaa jira nin qalab warbaahin oo qaali ah haysta,oo dad shaqaaleeyay,oo intaa meel kasta war doonimo u galaaya oo intaas oo dhan u qabanaya si bilaash ah oo cid wax kusiisa iyo cid uu u adeegayaaba ma jirto masidan ayaan ku qanacnaa?
1.Saxaafadii shisheeyuhu qabsaday,isagaa lawareegay dalkana kasifeeyay kuwii u adeegaayay shisheeyaha,nin walbana waxa uu waydiiyay oo kaliya wariye walba hal su aal uun oo isku mid ah, Dalka Runwanda kuma dirsan adiga in aad warka u tabiso umana shaqaysid lacagna kuma siiyo hadaba Adeer yaad ushaqaysaa? wax cararay iyo wax kabaxay jaajusnimadii ayay noqdeen iyo qaar yaroo go aan saday intay runta u sheegeen in ay hada kadib dalkooda u shaqaynayaan sharcigana raacayaan dalka.
2.Ciidamada qaranka oo uu dhisay sida uu dhisayna waa isagaa ku qoray gacantiisa ciidamada. kadibna wuu guulaystay dalkiisiina cadawgii gudaha wuu ka adkaaday maantana waa dalalka uugu hormarsan afrikada madoow.
2.Ganaacsato suuqa bakaaraha fadhida oo ku qariya lacagaha shabaabku hawlgalaan,lacagaha siyaasiyiinta xanaaqsan iyo lacagaha loogu tala galay in dalkeena lagu burburiyo,waxayna dumiyaan suuq kasta oo MOGDISHO ka furma,si ay lacagaha dibada ka yimaada ee cadawgu soo galiyo dalkeena uuga dhigaan lacag ku timid ganaacsi suuqana laga dhigo suuq shaqo ka socoto oo camiran. ganaacsatada bakaaraha iyaga xabadu makarto sida siyaasiyiinta xanaaqsan cidina ayaga utaaban oo kale!! masaakiinta unbaa lagu dilaa iyaga unbaana dila
SHABAKADII ISKU XIRNAYD QAYBTA BAARLAAMANKA U FADHIDA EE ISKA DHIGA MUCAARADKA OO LA SHAQAYEEYAY WARDOON U ADEEGAYA DANAHA GURACAN EE SHISHEEYE TANOO SHACABKII SOOMAALIYEED LAYAABEEN IYO BAARLAMAANKIIBA.
Waxaa la fashiliyay mashruuc dibada looga soo dhiibay,oo ahaa in laga hortago wiiqida dawlada soomaaliyeed oo shacabkeeda kaashanaysa ay wiiqday argagixida cadawga ah ee afka duuban. gacan saraynta ciiamadeena amaanku ay ka gacan sareeyaan iyo baacsiga ay baacsanayaan cadawga shacabka Mogdisho iyo guud ahaan soomaaliya ayaa laga xumaaday. waxaana laysku dayay in lacago badan lagu bixiyo in baarlamaanka soomaaliyeed looga yeero hay adihii iyo taliyayaashii amaanka ee guushaa keenay!!
Suaalo loo soo dhiibay oo ah in cadawgu ogaado qaabka iyo sifaha loomaray adkaanshaha laga adkaaday cadawga shabaabka in bal wax uun laga ogaado, hala warysto taliyayaasha qaranka. waxaa kaloo dhinacsocota in arimahan looga dhigo mashquul si ay fursad u helaan shabaab,waa mashquulin iyo abuurid qalalaaso. maadaama dalku dagaal gudaha ah ku jiro cadaw iyo nin shisheeye u shaqaynaaya mooyee nin wadani ah oo xalaal ah oo xildhibaan ahi ma docwareemi karo hawlgalka kuwa shacabka gumaaday lagu baacsanaayo in uu ku faraxo oo sii dhiiri galiyo mooyee.
Waxaa soobaxay xildhibaano ka gadooday in layska celiyay oo la jabiyay shabaab!! waxayna baarlamaankii soo galiyeen iyagoo awooda xasanada xildhibaanimo si xun u adeegsanaaya wariyaayaal aan dawlada soomaaliyeed u diiwaan gashanayn,cid ay u shaqeeyaan aan la ogayn? hadaba waxaa waajib ku ah dawlada soomaaliyeed in xildhibaanadu cadeeyaan saxaafadaa xorta ah ee ka xortaha danaha dalka iyo dawlada iyo dadka soomaaliyeed halkay isku barteen iyo ciday u shaqeeyaan iyo sababtay ugu yeereen? Arimaha baarlamankan la dhex jiifo oo cadawgu dhex jiifo waxaa kala hufidiisa leh hay ada dalwalba ilaalisa ee ah Hay ada nabadsugida qaranka soomaaliyeed. dabagalka iyo sugidu waa in ay wada socotaa waa maxay dalkan sirdoon la aanta ahi?
Baarlamanku maha meel cadawgu ku dhuumaalaysto oo inooga gabado! xildhibaanada markay dalka ka baxaan waa in lala socdaa ciday la kulmaan markay gudaha joogaana waa in dabagal xoogan jiraa maxaayeelay waa cadaan nin walbaa arko in cadaw dhex jiifo baarlamaanka u adeegaaya oo la shaqaynaya shabaab walaahi iyo bilaahi iyo talaahi in ay yihiin iyagii oo aan afku uduubnayn oo kaliya uun.eeg una fiirsada askari miskiin ah oo ilmaha u xamaasha waa la dilayaa oo waxaa laleeyahay dawladuu u shaqeeyaa waa gaal laakiin siyaasiyiinta xanaaqsan MOQDISHO ayay dhex laafyoodaan cid taabataana majirto!! maxaa kuubaxay? hay ada nabad sugida waa jiifaan cid ay ugaartaan lama arko! waa in dawladu arinkaa dib boodhka uga jaftaa. shircigaa qaba ninka kudilaya in aad disho,dawladnimadu maha mid ku timaad waligeedba waxaan ahayn in loo dhinto mooyee wax kale.
Adeer ninka nabad iyo nolol inoo diidan iyo in aan noqono umad jirta oo dawlad ah waa waajib in aan ku ruuxbaxnaa suuro galna maha in aan wada noolaano cadawgaas. ninbaa leh wariyaan ahay dalkaagii buu jaajuusayaa waana daawanayaa sababtoo ah waa reer hebal adeer waxaasi shaqayn mayso hacadeeyo ciduu u adeegayo kadibna ha lasugo. waxaan illaahay ka baryayaa in uu dalkeena ka dhigo mid nabdoon soomaali oo dhamina gacmaha is qabsato,kuna noolaadaan nabad iyo nolol wanaagsan oo dagan oo xasiloon.qaranimo iyo dawlad nimo ayaan rabnaa soomaalinimo ayaan rabnaa dalka aan u dhimano waxaan hubaa in aan guulaysanayno.
waxaa xasuus mudan sidoo kale dalkii USSR ee rashiya in 1991 la burburiyay dawladiisii kadibna ay qabsatay saxaafada xorta ah!! wiil wadani ah oo layiraahdo Putin ayaa u kacay dalkaas oo gacan ku dhigay bir ah saxaafadii xorta ahayd! isagoo dalkii ku soo dabaalay saxaafad u adeegta danta dalka iyo dadka rashiya oo ku shaqaysa xeerka saxaafada dalkooda u dagsan, halka saxaafadii xorta ahayd u kala firdhadeen dalalkii ay u adeegayeen.
Wasiirka Maaliyadda Puntland oo sheegay in Masuuliyin ka tirsan Puntland Musuq loo xiray (Daawo)